Samsung Galaxy M30 adịlarị emelitere na gam akporo 9 achịcha | Gam akporosis
N'oge na-adịbeghị anya Samsung na-eju anyị anya na usoro nkwalite ya. Onye mepụtara ya were ogologo oge iji melite njedebe ya, mana otu afọ ihe agbanweela nke ukwuu. Na Samsung Galaxy M30 bụ ihe atụ ọhụrụ nke ya.
Anyị na-ekwu okwu banyere otu ngwaọrụ guzo ọtọ maka inwe a ọnụahịa akwụghị ụgwọ, gbakwunyere usoro igwefoto atọ ịsọ mpi ya na ndị ya na ha dị n’etiti na, ihe ka mma ugbua, inwe ike imelite ụdịdị sistemụ arụmọrụ gam akporo kacha ọhụrụ.
Samsung Galaxy M30: etiti di na onu ahia mara nma
Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị na-ekwu maka ọnụ yana ezigbo ngwaike ihu ndị asọmpi ya. Anyị na-ekwu maka isi isi Exynos processor, Mali G71 GPU, 4 ma ọ bụ 6 GB nke RAM dabere na ụdị a na ụdị abụọ nwere 64 ma ọ bụ 128 GB nke nchekwa dị n'ime. Nke kachasị mma, ugbu a enwere ike ịkwalite ya A gam akporo 9 achịcha, nsụgharị kachasị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ sitere na ụlọ ọrụ ndị dị na Mountain View.
N'aka nke ọzọ, kwuo na ụfọdụ ndị ọrụ nke ọkọlọtọ ugbu a nke etiti ụlọ ọrụ Korea na-anata mmelite kwekọrọ na gam akporo 9 Pie. Kedu ihe nke a pụtara? Na n'ime izu ole na ole sochirinụ, Ndị niile nwere Samsung Galaxy M30 ga-enwe ike imelite ya na Android 9 Pie.
Ihe ikwesiri ime ugbua bu ichere. Firmlọ ọrụ ahụ na-ebupụta mmelite nke Samsung Galaxy M30 nke Samsung n'ụzọ dị egwu, yabụ ọ ga-adị mkpa ịnwe obere ndidi ebe ọ bụ na ụdị sọftụwia ọhụrụ a ga-abịa nke nta nke nta. Lezienụ anya, ọ ga-abịakwa na One UI 1.1, ihe kachasị ọhụrụ nke interface Samsung maka ngwaọrụ mkpanaka gị nke ị nwere ike iji nweta mammoth kacha mma. 6.4-inch ihuenyo nke Samsung Galaxy M30.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy M30 na-emeliterịrị gam akporo 9 achịcha